Siyaasiyiin ku xiran xabsiyada Ethiopia oo cuntadii ka soomay -
Home News Siyaasiyiin ku xiran xabsiyada Ethiopia oo cuntadii ka soomay
Siyaasiyiin ku xiran xabsiyada Ethiopia oo cuntadii ka soomay
Siyaasiga caanka ah ee Itoobiya, Jawaar Maxamed iyo 19 kale oo loo heysto eedeymo la xiriira argagixisanimo ayaa muddo ka badan 13 maalmood ku jiraan gadood cunto ka soomid ah, sida ay sheegeen qareennadooda.
Eedeysaneyaashan ayaa bishii September lagu soo oogay dacwado salka ku haya mowjadihii qalalaasaha qoomiyadaha ee daba socday dilkii bishii June loo geystay fanaan Oromo ahaa oo lagu magacaabi jiray Hachalu Hundessa.
In ka badan 150 ruux ayaa ku dhintay rabshadihii ka dhashay geerida fannaanka, oo lagu toogtay gudaha magaalada caasimadda ah ee Addis Ababa.
Mr Jawaar oo ah nin saaeyn leh, horayna u lahaan jiray xarun warbaahineed iyo siyaasiga lagu magacaabo Bekele Gerba, oo ah guddoomiye ku xigeenka xisbiga Oromada ee OFC, ayaa ka mid ah dadka gadoodka cunto ka soomidda ah ka wada xabsiga Kaliti.
Waxay dalbanayaan “in la sii daayo dhammaan dadka Oromada ah ee loo xiray arrimaha siyaasadda iyo in la soo afjaro tacaddiyada loo geysto qoysaska ay kasoo jeedaan siyaasiyiinta xabsiga ku jira”, sida ay Facebook ku soo qoreen kooxda qareennada ah ee u doodaya hoggaamiyeyaashaas.
Mid ka mid ah qareennadooda, oo lagu magacaabo Kedir Bulo, ayaa BBC-da u sheegay in afar maxbuus ay suuxeen dhowr maalmood ka hor, halka qaarkoodna looga cararay isbitaalka si loo daweeyo.
Mas’uuliyiinta dalka Itoobiya wali kama aysan hadlin arrinta ku saabsan gadoodka cunto ka soomidda.
Xubno ka mid ah qoysaska siyaasiyiinta xiran ayaa sheegay in ay aad uga walaacsan yihiin sida ay noqon doonto xaaladdooda caafimaad.
Maalintii Talaadada, koox isugu jirta wadaad diimeedyo iyo hoggaamiyeyaal siyaasadeed ayaa ku guul darreystay dadaal ay ku doonayeen in ay maxaabiistaas uga dhaadhiciyaan joojinta gadoodka ay cuntada ku diidan yihiin.
Jawaar Maxamed wuxuu Itoobiya dib ugu laabtay sanadkii 2018-kii, kaddib markii uu ka tagay Mareykanka oo uu ku noolaa, isagoo go’aankaasna qaatay kaddib markii uu xukunka la wareegay Ra’iisul Wasaare Abiy Axmed.
Labda nin ayaa mar ahaan jiray xulafo siyaasadeed oo aad isugu dhow, balse markii uu dalka ku laabtay ayuu Jawaar billaabay in uu dhaliilo Dr Abiy Axmed, isagoo ku eedeynayay in uusan dadaal ku filan u sameynin wax ka qabashada dhibaatooyinka ay muddo dheer ka cabanayeen dadka Oromada ah – oo ah tirada ugu badan ee shacabka Itoobiya – labadiiduna ay kasoo jeedaan.
Next articleIlhaan Cumar oo loo magacaabay xil muhiim ah